iOS 3 ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
iOS 3, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe iPhone OS 3.0, nitondra fanatsarana maro ho an'ny iPhone toy ny fijerena sary amin'ny Mail, SMS, ary Notes. Fampiharana handraketana feo na feo milina fikarohana Spotlight tena mitovy amin'ny OS X izay mamela anao hahita fampiharana, mozika, fifandraisana na hikaroka ao amin'ny Internet. Nisy lesoka lehibe koa nesorina, toy ny tsy fahaizana mandika, manapaka ary mametaka lahatsoratra na tsy afaka mizara ny fifandraisanay data amin'ireo fitaovana hafa amin'ny alàlan'ny WI-FI (tethering).
Ny fampiharana iOS Music dia nanisy fiovana lehibe tamin'ny fahatongavan'ny iOS 10. Fiovana maro no niabo, na dia…
Mety tsy hahomby ny fanairana IPhone amin'ny fanovana fotoana
ny Ngarcia2.0 hace 10 taona .
Mbola manana olana amin'ny fanairana iPhone ihany koa i Apple, na dia toa tsy misy vokany izany ...
ny Enrique Benitez hace 11 taona .
ny Mundi hace 12 taona .
Ahoana ny fomba hanidiana ny fampiharana mihantona amin'ny 3.0
ny Enrique Benitez hace 12 taona .
Ao amin'ny firmwares talohan'ny 3.0, mba hanidiana ny rindrambaiko nahantona dia mila tsindrio fotsiny sy tazonina ny bokotra Home mandritra ny segondra vitsy mandra-pahatongan'ny ...
Mandefa sary mihoatra ny iray avy amin'i MMS nefa tsy mampihena ny habeny
ny berllin hace 12 taona .
Hatramin'ny namoahana ny Firmware 3.0, fantatsika rehetra fa misy sary maromaro azo alefa amin'ny alàlan'ny MMS, mandra-pahatongan'ny ...